Bit By Bit - Ethics - 6.1 Hordhac
The Cutubyadii hore waxay muujiyeen in da'da digital abuuraa fursado cusub uririnta iyo falanqeynta xogta bulshada. Da'da digital ayaa sidoo kale abuuray dhibaatooyin cusub anshaxa. Hadafka cutubkan waa inay ku siiyaan qalab ah in aad u baahan tahay in ay la tacaalaan caqabadaha kuwan anshaxa.
hadda waxay shaki iyo khilaaf ku saabsan anshaxa ku haboon ee qaar ka mid ah cilmi bulsho da'da digital. hubin Tani waxay keentay in laba dhibaatooyin la xiriira, mid ka mid ah taas oo uu helay dareenka ka sii badan intii kale ee. Dhinaca mid, cilmi qaar ka mid ah ayaa lagu eedeeyay in ay jabiyeen gaarka ah ee dadka ama diiwaan-qaybgalayaasha in tijaabo xumo. Xaaladaha-oo aan ku tilmaami doonaa in this Kuwani cutubka-ayaa la kulma ee dood ballaaran iyo dood. Dhinaca kale, la hubin anshaxa ayaa sidoo kale saamayn horjoogsado, ka hortagga cilmi anshax oo muhiim ah oo ka dhacaya, xaqiiqo ah in Waxaan qabaa waa wax badan ka yar mahad. Tusaale ahaan, intii lagu guda jiray 2014 Ebola ka dillaacay, saraakiisha caafimaadka dadweynaha doonayay macluumaad ku saabsan dhaqdhaqaaqa dadka ee wadamada inta badan si xoog cudurka si ay u caawiyaan xakameeyo cudurka dillaacay. Shirkadaha telefoonka Mobile ayaa Caddaynay diiwaanka call in ay bixin karo qaar ka mid ah macluumaadka this. Weliba, walaac anshaxa iyo sharci galla cilmi 'isku day si ay u falanqeeyaan xogta (Wesolowski et al. 2014) . Haddii aan qaadi karaan xeerarka anshaxa iyo heerarka la wadaago labada cilmi iyo guud-iyo waxaan qabaa inaan u samayn karaa-ka dibna waxaan fuula kartaa awoodaha of da'da digital siyaabo in ka mas'uul oo faa'iido u leh bulshada waa.
Waxaa jira kala duwanaansho muhiim ah oo u dhexeeya sida bulshada saynisyahano iyo cilmi xogta dhawaanina anshaxa cilmi baarista. Waayo, saynisyahano bulshada, fikirka ku saabsan anshaxa waxaa ku badan Institutional Review Guddiyada (IRBs) iyo xeerarka in ay xilsaaray fulinta. Ka dib oo dhan, sida kaliya oo culumadu bulshada ugu taaban karo la kulmaan dood anshaxa waa habka maamul ee dib u eegista IRB. saynisyahano Data, ayaa dhanka kale, waxay leeyihiin waayo-aragnimo nidaamsan yar la anshaxa cilmi maxaa yeelay, waxaa aan caadi hadlay sayniska kombiyuutarka iyo injineernimada. Midkoodna oo ka mid ah waji-ka hab xeerarka ku salaysan ee saynisyahano bulshada ama hab ad hoc-xogta saynisyahano-waa ku habboon cilmi bulshada ee da'da digital. Halkii, waxaan rumaysan nahay inaynu sida sida bulshada horumar ka dhigi doonaa haddii aan la qaato ah mabaadi'da ku salaysan hab. Taasi waa, cilmi waa in qiimeyn ay cilmi dhex jira xeerar-oo waxaan qaadi doonaa sidii siiyey iyo u qaadan waa in followed- oo dhex mabaadii'da guud ee anshaxa ka badan. Habkan mabaadi'da ku salaysan hubisaa in cilmi sameyn kara go'aanno macquul ah oo ku saabsan cilmi-baarista kaas oo xeerar aan weli la qoray iyo in aan xiriiri kartaa sababaynta la cilmi kale iyo dadweynaha.
The hab mabaadi'da ku salaysan in lay doodaya ma aha cusub, waxaa barbaro on sano oo fikirka hore. Sida aad arki doonaa, mararka qaarkood hab mabaadi'da ku salaysan keenaysaa in ay nadiifiso, xal lagu hawlgali karo. Oo, marka aysan u horseedi in ay xal sida, waxaa caddaynaya ah ganacsiga-offs lug, taas oo muhiim u xoogbadan dheelitirka ku haboon iyo in ay awoodaan in ay sharax sababaynta in cilmi kale iyo dadweynaha. Dheeraad ah, sida aad ka arki doontaa, qaadashada hab mabaadi'da ku salaysan uma baahna lacagta weyne waqti. Marka aad baran mabaadi'da asaasiga ah, waxaad u isticmaali kartaa si dhaqso ah oo hufan fikiraan oo ku saabsan tiro balaadhan oo ah dhibaatooyin. Ugu dambeyntii, hab mabaadi'da ku salaysan waa ku filan guud Waxaan filayaa in ay noqon doonaan mid waxtar leh arrinta ma meesha cilmi qaadataa meel ama meesha aad ka shaqeysid (tusaale ahaan, jaamacadaha, dawladda, NGO, ama shirkad).
Cutubkan ayaa loogu talagalay in cilmi-a iyo sidoo kale-oo macnaheedu yahay shaqsi caawiyo. Sidee waa in aad u malaynayso oo ku saabsan anshaxa ee shaqo u gaar ah? Maxaad samayn kartaa si aad shaqo u gaar ah in ka badan anshax? In Qaybta 6.2, waxaan ku tilmaami doonaa saddex mashruuc cilmi da'da digital in ahbaa dood anshaxa. Markaas, Qaybta 6.3, Waxaan la taaban karin kuwa tusaalooyin gaar ah si ay u sharxaan waxa aan u malaynayaa waa sababta aasaasiga ah ee la hubin anshaxa, awoodda si degdeg ah sii kordhaya cilmibaadhayaal si ay u dhawraan oo tijaabo ah oo ku saabsan dadka aan ogolaansho ama xataa wacyiga. awoodaha waxaa loo beddelo si ka dhaqso badan our caadooyinka, xeerarka, iyo shuruucda. Next, Qaybta 6.4, waxaan ku tilmaami doonaa afar mabda jira in toosin kara mid aad fikirkooda: Ixtiraamka Dadka, Raxmaan, Caddaaladda, iyo Ixtiraamka Law iyo Public Interest. Markaas, Qaybta 6.5, waxaan soo koobaan doonaa laba ballaadhan anshaxa qaab-consequentalism iyo deontology-oo kaa caawin kara in aad fikiraan mid ka mid ah caqabadaha ugu qotada dheer in aad la kulmi kartaa: marka waa waxa haboon in aad qaadato hab anshaxa su'aal si loo gaaro ah dhamaadka anshaxa ku haboon. Qodobadaasi waxay iyo qaab anshax aad u sahlaysaa in ay ka gudbaan oo diiradda saaraya waxa loo ogol yahay by sharciyada hadda jira iyo in la kordhiyo awoodda aad kula xiriiri aad sababaynta la cilmi kale iyo dadweynaha (Jaantuska 6.1). Iyadoo jeeda in, Qaybta 6.6, waxaan ka hadli doonaa afar goobood, si gaar ah oo adag, waayo, cilmi bulsho da'da digital: ogolaansho wargeliyay (Qaybta 6.6.1), fahamka iyo khatarta macluumaadka maareynta (Qaybta 6.6.2), gaarka ah (Qaybta 6.6.3 ), iyo go'aan qaadasho anshax in wejiga la hubin (Qaybta 6.6.4). Ugu dambeyntii, Qaybta 6.7, waxaan soo gabagabeyn doonaa saddex talooyin wax ku ool ah, waayo, ka shaqeeya goob la anshaxa aan saldhigan. In Lifaaqa Historical ah, waxaan ku tilmaami doonaa horumar ah nidaamka hadda jira ee korka anshaxa cilmi baarista ee dalka Mareykanka oo ay ku jiraan Waraabow Tuskegee ka Study, Report Belmont ah, Rule Common, iyo Report Menlow ah.
Jaantuska 6.1: Xeerarka lagu maamulo cilmi yihiin oo ka soo jeeda mabaadi'da taas oo iyana waxaa lagu soo jeeda Qaababka anshaxa. Dood A weyn ee cutubkan waa in cilmi-waa in qiimeyn ay cilmi marayo xeerar-oo waxaan qaadi doonaa sidii siiyey iyo u qaadan waa in followed- oo dhex mabaadii'da guud ee anshaxa dheeraad ah ee jira. Rule The Common waa set ee xeerarka hadda maamula cilmi ugu federaalku ay maal-galiso ee Maraykanka (wixii macluumaad dheeraad ah, eeg Lifaaqa Historical ah). Report Belmont iyo Report Menlow ah (wixii macluumaad dheeraad ah, eeg Lifaaqa Historical ah): The afar mabda 'ka laba darfahoodii buluug-qoofalan in ay doonayeen inay siiyaan hanuun anshaxa cilmi iman. Ugu dambeyntii, consequentialism iyo deontology waa qaab anshax in la soo saaray by faylosuufiinta boqolaal sano. Hab dhakhso ah oo cayriin in la kala saaro labada Qaababka waa in consequentialists diiradda on darafyadiisa oo deontologists diiradda saaraan hab.